Nagarik News - हात थापेर कतिन्जेल बस्ने ?
Sunday7Magh, 2074 |
हात थापेर कतिन्जेल बस्ने ?
19 May 2015 | 17:00pm
मङ्गलबार ५ जेष्ठ, २०७२
पोखरा- भूकम्पले घर लडाएपछि माया गुरुङको परिवार गाउँमाथिको डाँडामा पाल टाँगेर बसेको थियो । २७ सय मिटर उचाइको त्यो डाँडाको बसाइको एक सातामै उनका ८ महिने छोरा युमन बिरामी परे । कलिलो शिशुको छाती घ्यारघ्यार गर्न थालेपछि माया छोरालाई काखी च्यापेर पोखरा आइपुगिन् ।
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका डाक्टरले शिशुलाई निमोनिया भएको बताए । औषधोपचार गर्न उनी केही सयम पोखरै बस्नुपर्ने भयो । त्यसैले वैशाख २१ यता माया पोखरा नयाँबजारमा तमु धिंमा आश्रय लिइरहेकी छन् ।
गुरुङ समुदायको हितमा क्रियाशील तमु धिंको बसाइ मायाका लागि असजिलो छैन । ‘यहाँ त सजिलो छ,’ मायाले नागरिकसँग भनिन्, ‘धेरैजना सहयोग गर्न आइरहनुहुन्छ ।’ मायाजस्तै थुप्रै भूकम्प पीडितहरु वैशाख दोस्रो सातादेखि तमु धिंमा आश्रय लिइरहेका छन् । यहाँ उनीहरुलाई खाने र बस्नेको राम्रै प्रबन्ध छ । खेल्न केटाकेटीहरुलाई सामग्रीहरु छन् । बुढाबुढीहरुलाई हेर्न टिभी छ । पोखरा र फेवाताल डुल्न मन लागे पनि डुलाइन्छ । दाताहरु दिनहुँ आउँछन् र केही न केही दिएर जान्छन् । सुत्केरीहरुलाई तेल घस्ने, मालिस गरिदिने र बिरामीलाई गाह्रो साह्रो पर्दा अस्पताल लानेल्याउने सबैखाले व्यवस्था पनि छ । तर पनि घाइतेहरु भने आफ्नै घरको सम्झनाले तड्पिरहेका छन् । भन्छन्, ‘कतिन्जेल यसरी अर्काको हात थापेर बस्ने ?’
‘जस्तो भए पनि आफ्नो ठाउँ पुगेर फेरि पुरानै जीवनमा फर्कन चाहन्छौं,’ गोरखा गुम्दाका सुमन गुरुङले भने, ‘हामीलाई भन्दा पनि केटाकेटी र बुढाबुढीहरुलाई गाउँ लगेर कसरी राख्ने ? के गर्ने ?’ मंगलबार तमु धिंले आफ्नो वार्षिकोत्सव भूकम्प पीडितहरुसँग मनाइरहँदा आएका क्षेत्रीय प्रशासक दिनेश थपलियासामु सुमनले बुढाबुढी र केटाकेटीका लागि भए पनि सरकारबाट घर फर्केर ढुक्कले बस्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे ।
माया गुरुङ छोरालाई लिएर पोखरा आएपछि गोरखाको लाप्राकबाट उनका पति देवराज पनि आइपुगेका छन् । गाउँमा अरु २ छोराछोरी आफन्तको शरणमा छन् । माया र देवराजलाई ती छोराछोरीको औधी चिन्ता छ । ‘घर बनाउने काम गर्थें,’ देवराजले सुनाए, ‘आफ्नै घर भत्कियो, अब के गर्ने केही थाहा छैन ।’ देवराजको मात्रै होइन, गोरखाको लाप्राकका ५ सय ५० घर सबै भत्किएका छन् । ती सबैले २१ सय मिटरको गाउँ छाडेर २७ सय मिटर अग्लो गुप्सी डाँडामा पाल टाँगेर बसेका छन् ।
वैशाख १२ गते भूकम्प गएयता तमु धिंमा ३ सय जना पीडितले आश्रय लिएको धिकी सहकोषाध्यक्ष सरस्वती गुरुङले जानकारी दिइन् । ‘केही घर फर्किसक्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले डेढ सयजना जति हुनुहुन्छ ।’ तमु धिंबाहेक पोखराका अरु संस्थामा पनि भूकम्प पीडितले आश्रय लिइरहेका छन् ।